Shiinaha jilicsan PVC jiinyeer jiida warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Jilibyada jilacsan ee jilicsan ee PVC waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee laga helo Hadiyadaha Quruxda Badan. Jijimooyinka jilicsan ee PVC jiinyeerrada waxaa lagu farsameeyaa farsamo dhimis 2D ama 3D dhammaad ah, si loogu keeno summadahaaga iyo naqshadahaaga si firfircoon waxyaabaha yaryar.
Jijjirada jiinyeerrada jilicsan ee PVC waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee laga helo Hadiyadaha Quruxda Badan. Soojiidayaasha jiinyeerka caadada u ah waxaa lagu farsameeyaa dhinta farsamada 2D ama 3D dhammaadka, si loogu keeno astaamahaaga iyo naqshadahaaga si firfircoon waxyaabaha yaryar. Dadku waxay u adeegsan karaan jilicsanayaasha jiinyeerrada PVC ee jilicsan ma aha oo kaliya dharkooda, laakiin sidoo kale waxay ku ridaan bacaha, shandadaha, koofiyadaha, summadaha muhiimka ah, iyo kuwa kale ee adeegsada siibadaha. Faahfaahinta oo dhan waa la beddeli karaa, qaababka dabacsan iyo astaamaha midabada leh ayaa ka dhigaya waxyaabaha ma guurtada ah kuwo aad u muuqda oo soo jiidasho leh, oo muujinaya summadahaaga, fikradahaaga iyo fikraddaada waxyaabo fudud.
Waqtiga duulimaadka oo ay weheliso, dad aad u badan ayaa daneeya dhibaatooyinka deegaanka. Soo -saareyaasha zip -ka ee jilicsan ee PVC waxaa lagu sameeyaa agab saaxiibtinimo si looga gudbo heerarka imtixaanka ee hay'adaha Mareykanka ama Yurub, si loo qanciyo dalabaadka kala duwan ee macaamiisheena.
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Guud: jillaab, xarig, giraan fure ama si ay u saxeexaan macaamiishu
Hore: Calaamadaha Bacaha PVC ee jilicsan
Xiga: Baararka PVC ee jilicsan
Qulqulka zip -ka gaarka ah
Qufulka jiinyeer jiid
Jiinyeer caaga ah
PVC jiinyeer jiidaya
Zipper Slider iyo Puller